Dowladda Fadaraalka Oo ka Hadashay Go’aanka Kenya ku Joojisay Duulimaadyada Somaliya – Heemaal News Network
Dowladda Fadaraalka Oo ka Hadashay Go’aanka Kenya ku Joojisay Duulimaadyada Somaliya
Dowladda Soomaaliya ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay go’aan Kenya ay ku joojisay duulimaadyada Soomaaliya, xilli labada dal uu dib usoo celiyay xidhiidhkoodii diblumaasiyadeed ee horey u go’ay.
Wasiirka gaadiidka iyo duulistada hawada Soomaaliya, Duraan Axmed Faarax, ayaa sheegay in aysan waxbo kala socon go’aanka Kenya ay ku hakisay duulimaadyada, sidoo kalena aysan ka helin wax wargalin ah madaxda dalkaas.
Kenya ayaa sheegtay in illaa bisha sideedaad ee sanadkan ay hakinayaan duulimaadyada taga iyo kuwa ka yimaada Soomaaliya
“Runtii arrin la yaab leh ayay inoola muuqataa, wax la fahmi karana ma aha iyadoo hadda laisla lahaa dowladda Soomaaliya rabtay in lasoo celiyo heshiiskii labada dal, labo maalmood ka bacdi in Kenya ay qaadato go’aan noocan ah waa arrin aanan fahmeyn waxa ka dambeeyana aanan garan karin,” ayuu yiri wasiirku.
Sanadkii hore bishan August ayay ahayd markii dowladda Kenya ay sidaan oo kale hakad galiyay dhamaan duulimaadyada aada iyo kuwa ka baxa Soomaaliya kadib khilaafkii diblumaasiyadeed ee u dhaxeeyay labada dal ee deriska ah.
Dowladda Sacuudiga Oo War kasoo Saaray Maalinta Ciida
Farmaajo Oo si Wayn Loogu soo Dhaweeyay Dalka Uganda.(Sawiro)
Siyasi Bubaa Oo Sheegay Inay-san Somali Kala Maarmayn Xisbiyadooda-na ku Tilmaamay kuwo Shuuci ah.
South Africa Oo Diiday Qaabilaada Qaxootiga Afganistan.